RW Cumar C/rashiid oo kulan la qaatay Amiirka dalka Qadar * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
R/wasaaraha Soomaaliya, Cabdi Rashiid Cali Sharmaake oo ku sugan dalka Qadar isaga iyo Xubno wasiiro ah oo uu hugaaminayo ayaa waxaa uu Maanta kulan la qaatay Amiirka Wadanka Qadar Sheekh Xamad Bin Khalifah kaas oo ka dhacay Xafiiska Amiirka.
Kulanka oo qaatay saacado ayaa waxaa looga hadlay Xiriirka labada dalka sida ay dowladda Qadar Gacan uga geysan karto in Soomaliya ay ku soo laabto Heerkii ay Aduunka ka joogtay Waxaana kulankaasi ku soo idlaaday Jawi dagan iyadoo heshiisyo ay kala Saxiixdeen labadda Dowladood.
Wasiiradda Arimaha Dibadda labada Dowladood iyo Wasiiradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada labada Dalka ayaa kala Saxiixday Heshiisyo Dhowr Qodob ka kooban oo ay ka mid ahaayeen in Diyaaradda Qadar Airways ay Dalka Soomaaliya ka bilowdo Duulimaad toos ah oo ay ku imaaneyso iyadoo labada wasiir Arima Dibadeed ay kala saxiixdeen Heshiisyo la xiriir iskaashiga labada Dalka iyo in kulamo kale lagu balamay .
Amiirka Dalka Qadar Sheekh Xamad Bin Khalifah ayaa waxaa uu Ra,iisul wasaaaraha Somalia u balan qaaday in Dowladiisu ay Taageero dhan walba leh ay la garab taagan tahay Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo ay horaba u garab taagneed arintaas oo uu si weyn ugaga Mahadnaqay Dr Cumar Cabdi Rashiid Amiirka Dalkaas